my kitchen my life: သြော်.... GluTen
chef , seafood salad က gluten free ဖြစ်သလား။ room service က ဖားမလေး က လှမ်းမေတာပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျနော်ကလည်း ဒီစကားလုံးကို ခု မှ ကြားဖူးတာ။း) ဒါနဲ့ ပြန်မေးရတာပေါ့။ ဘာလဲ လို့ gluten free ဆိုတာ။ ငါ ကြားဖူးတာက sugar free ကိုပဲ လို့။ gluten free က glucose ကလာတဲ့ စကားလုံးလားလို့။ ဖားမလေးကလည်း မသိဘူးတဲ့ ။ ကျနော်ကလည်း ညပိုင်းက အကြီးဆုံး မောစ့် နဲ့ မာမီ ရဲ တို့ကို မေးတာပဲ။း) သူ တို့က လည်း သိဘူးတဲ့ဗျာ။ ကောင်းရော...။
ဖားမလေးက ဧည့်သည်ကို ပြန်ပြောဟန်တူပါတယ်။ ဧည့်သည်က တော်တော် လာ တယ်ဗျ။ အဲ့ဒီ chef တွေ မသိရင် သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက် ခိုင်းလိုက်လို့ ပြောတယ် တဲ့ဗျာ ။ နောက် ဆက်ရစ်တော့တာပေါ့။ အာလူးကြော်ထဲမှာ ဂျုံ ပါလား တို့ ၊ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲတို့ စုံလို့ စုံလို့ပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ သူမေးတဲ့ ဟင်းပွဲတွေ မမှာဘဲ တခြား ဟင်းပွဲပဲ မှာသွားတယ်။ ကျနော်လည်း တနုံနုံနဲ့လေ။ မနက်ခင်းရောက်တော့ မနက်အဆိုင်းက ဘဂုံး chef ကိုမေးကြည့်တယ်။ သူပြောတာက ဟုတ်တုက်တုက်ဗျ။ မင်း အာဂျီနိုမိုတို AJinomoto ကို မသိဘူးလားတဲ့ ။ သိတာပေါ့လိုက ကျနော်ကပြောတော့ gluten ဆိုတာ အဲ့ဒါကို ပြောတာတဲ့လေ။ ကျနော်က ခပ်တည်တည်နဲ့ အာဂျီနီုမိုတို ကို သွားယူတာပေါ့။ ငှဲငှဲ ။ ဒီမှာ ရေးထားတာက mono sodium glutamate လို့။ gluten လို့ ရေးမထားဘူးလို့ပြောတော့ သူကြားဘူးတာက stock ဈေးမှာတဲ့ အခါ အာဂျီနိုမိုတိုကို glutamate လို့ အပြည့် မခေါ်ဘဲ gluten လို့ပဲ ခေါ်တယ်တဲ့ဗျာ။ ကျနော် လည်း ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်သွားရော။ သူ့ အဖြေကိုတော့ အပြည့်အ၀ မကျေနပ်ဘူးလေ။ တစ်ယောက်မေး တစ်မျိုးပြောနေကတည်းက ငါ ထင်တယ် လို ဖြစ်နေတယ်လေ။ ;)
နောက်ဆုံးတော့ Google ကို ပဲ အားကိုးရတာပေါ့။
gluten ဆိုတဲ့ စကား ဟာ Latin ဘာသာက ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ် ဘာညာသာရကာ တွေ့ရတာပဲဗျိုး။
( credit to > http://wesheme.blogspot.com/2008/11/logo-on-food.html )
ခုတော့ ရှင်းသွားပြီ။ Gluten ဆိုတာ အာဂျီနိုမိုတို မဟုတ်မှန်း ။း) ကျနော်တို့ ရွှေထဲမှာ gluten free စားတဲ့သူ ရှိသလား မသိဘူးနော်။း)
Removing gluten from the diet is not easy. Grains are used in the preparation of many foods. It is often hard to tell byafood's name what may be in it, so it is easy to eat gluten without even knowing it. However, staying onastrict gluten-free diet can dramatically improve the patient's condition. Since it is necessary to remain on the gluten-free diet throughout life, it will be helpful to review it witharegistered dietitian.
The person who prepares the patient's food much fully understand the gluten-free diet. Read food labels carefully:
Onion, garlic, leeks, Jerusalem artichokes, asparagus, chicory root, jicama, dandelion, banana, agave, jams, Prebiotin
Salt, pepper, herbs, flavored extracts, food coloring, cloves, ginger, nutmeg, cinnamon, bicarbonate of soda, baking powder, cream of tartar, monosodium glutamate Curry powder, seasoning mixes, meat extracts Synthetic pepper, brewer's yeast (unless prepared withasugar molasses base), yeast extract (contains barley)
All medicines - Check with pharmacist or pharmaceutical company.
Sugar - 1 tsp Baked chicken -3oz
Ice cream - 1/2
without wheat stabilizers. Sirloin steak -3oz
Fruit gelatin - 1/2 cup
Tea - 1 cup
Posted by leo mark at 11:14 PM
Sunny February 23, 2011 at 4:40 AM
Gluten free လား ဆိုတာတော့ တော်တော်ဖြေရခက်တယ်နော်..
ချမ်းလင်းနေ February 23, 2011 at 11:20 AM
MSG လို့လဲ တစ်ချို့ပြောတယ်။ အစ်ကိုကတော့ chicken pownder ပဲသုံးတယ်။ အမ်အက်ဂျီ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ထားတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်လို့ ထမင်းစားရင် အရမ်းသိသာတယ်။ လျာက အရသာ ပြောင်းနေပြီ ရန်ကုန်အိမ်က ချက်တာတွေလဲ စားရော အာဂျီနိုမိုတို သုံးတော့ တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက် ရန်ကုန်အိမ်ကိုတောင် အချိုမှုန့် လျော့သုံးဖို့နဲ့ သကြားနဲ့ ဟင်းချက်မှုန့် အစားထိုးသုံးဖို့တော့ ပြောခဲ့သေးတယ်။ သုံးမသုံးတော့မသိဘူး။ ဆီးချို သမားတွေအတွက်တော့ အန္ထရာယ်ကြီးတယ်လေ။
leo February 24, 2011 at 12:00 AM
@ sunny > ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျနော် တော့ ချာချာ လယ်သွားတယ်။း)
@ ကိုချမ်း > ဟုတ်တယ် အကိုရေ.။ အချိုမူန့် က လျှာ ဆွဲစေတယ်ထင်တယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ အိန္ဒိယ တွေကတော့ ဟင်းချိုမူန့် တတ်နိုင်သလောက် မသုံးကြဘူး လို့ ပြောတယ်။ အသီးအရွက်ကို ချက်တာတောင်မှ ဆား လေး နဲ့ အသီးအရွက် မှာပါတဲ့ သဘာဝ အချို ပါတဲ့ အရသာ ကို တွဲဆက်ပြီး ချက်ကြတာ အကိုရ...။ စ ပြီး စားခါ စ မှာ တော့ နည်းနည်း လို သလိုလို ရှိပေမဲ့ နောက်ကျတော့ အဆင်ပြေသွားတာပါပဲ။